Man United oo u gudubtay wareega siddeed dhamaadka Carabao Cup, kaddib markii ay Chelsea kaga soo adkaatay Samford Bridge… +SAWIRRO – Gool FM
(London) 31 Okt 2019. Manchester United ayaa u gudubtay wareega siddeed dhamaadka koobka Carabao Cup, kaddib markii ay 1-2 kaga soo adkaatay kooxda Chelsea oo ay marti ugu noqotay garoonka Stamford Bridge, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-ka ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hogaamineysay kooxda martida aheyd ee Manchester United.
Daqiiqadii 25-aad Manchester United ayaa heshay rigoore waxaana gool u badelay weeraryahankooda reer England ee Marcus Rashford, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 0-1.
Daqiiqadii 61-aad Chelsea ayaa heshay goolka barbaraha, waxaana ciyaarta 1-1 ka dhigay Michy Batshuayi.
Laakiin daqiiqadii 73-aad Manchester United ayaa markale hogaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-2 ka dhigay weeraryahanka reer England ee Marcus Rashford.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo idlaatay 1-2 ay guusha ku raacday kooxda martida aheyd ee Manchester United, Red Devils ayaa waxay sidaas ugu gudubtay wareega siddeed dhamaadka ee tartanka Carabao Cup.
Real Madrid oo guul sahlan ka gaartay kooxda Leganes oo marti ugu aheyd Santiago Bernabeu… +SAWIRRO